मन्त्रीद्वय आले र श्रेष्ठले अब ७८ दिनपछि देलान् त राजीनामा ? - खबर प्रवाह::Khabarprawaha.com मन्त्रीद्वय आले र श्रेष्ठले अब ७८ दिनपछि देलान् त राजीनामा ? - खबर प्रवाह
एकीकृत समाजवादी पार्टीका तीन जना नेतालाई मन्त्री बनाउनै पर्ने विषय फेरि सतहमा आएको छ । २०७८ माघ १२ गते हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनपछि उनीहरुलाई कसरी मन्त्रिपरिषद् मा समेट्ने भन्ने विषयमा उठ्ने संकेत देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अहिलेको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने सोचमा रहेका कारण पनि उक्त प्रसंग उठेको समाजवादी स्रोतले जानकारी दिएको छ । एकीकृत समाजवादी स्रोतका अनुसार, सांसदहरु मेटमणि चौधरी, कल्याणी खड्का र जीवनराम श्रेष्ठलाई मन्त्री बनाउने प्रसंग उठेको हो ।
अन्तिम समयमा मन्त्रीमा समेटिएका किसान श्रेष्ठ र पहिलादेखि नै मन्त्रीका लागि समाजवादीमा आएका प्रेम आलेलाई ६ महिनापछि राजीनामा दिने सर्तमा मन्त्री बनाउने चर्चा सुरु भएको छ । उनीहरूकाे कार्यकाल १०० दिन पुगेकाे छ ।
समाजवादीमा मन्त्री सिफारिस गर्ने सुरुको चरणमा चौधरीको नाम मन्त्री बन्ने सूचीमा पहिलो नम्बरमै पर्दथ्यो । चौधरीको नाम अन्तिम समयमा काटिएको स्राेत बताउछ। चौधरीलाई पर्यटन मन्त्री बनाउने अन्तिम समयसम्म चर्चा थियो ।
त्यतिबेला आलेको नाम पनि मन्त्री बनाउने सूचीमा भएपनि उनलाई अर्कै मन्त्रालयको जिम्मा दिने एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालको तयारी थियो । चौधरीलाई अन्तिममा समेट्न नसकिएपछि पर्यटन मन्त्रीको जिम्मा आलेको भागमा परेको हो ।
आले २०७४ सालदेखि नै पर्यटन मन्त्रालयका दावी गरिरहेका थिए । त्यतिबेला अध्यक्ष केपी ओलीसँग पटकपटक छलफल गरेर पर्यटनको मन्त्रालयको दावी गरेका थिए । तर, अन्तिममा ओलीले रविन्द्र अधिकारीलाई पर्यटन मन्त्री बनाएका थिए । त्यतिबेला यती समूहले भने आफ्नाे रबर स्ट्याम्प पार्वत गुरुङलाई पर्यटन मन्त्रालयका जिम्मा दिन लविङ गरेको थियो ।
अध्यक्ष माधव नेपालकै गृह जिल्ला रौतहटकी कल्याणी खड्काले पनि पहिलादेखि नै मन्त्रीको बन्ने रहर गरेकी थिइन् । तर, खड्का संसदीय समितिको सभापति समेत रहेकोले राज्यमन्त्री सरहको सुविधा पाइरहेकी छिन् । त्यसैकारण उनलाई केही दिन धैर्य गर्न सम्झाएको एकीकृत समाजवादी स्रोतको भनाई छ ।
मन्त्री बनाउन नसकेका कारण जीवनराम श्रेष्ठलाई अध्यक्ष माधव नेपालले प्रमुख सचेतक नियुक्त गरेका छन् । अहिले अवसर नपाएको तर लुम्बिनी प्रदेशमा काम गरिररहेका नेता चाहिं मेटमणि चौधरी हुन् ।
एकीकृत समाजवादीबाट मन्त्री भएकामध्ये आले चाहिं अनेक एक्सनमा उत्रिएका छन् । यिनै कारणले ६ महिनापछि मन्त्री पदबाट हट्नै पर्ने एकीकृत समाजवादीकाे पुरानो सहमति कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढे पनि तत्काल आलेलाई नहटाउन अध्यक्ष नेपालमाथि दबाब पर्ने देखिएको छ ।
एकीकृत समाजवादीको तर्फबाट मन्त्रीहरुको २०७८ माघ ३ गते सोमबार एक सय दिन पुगेको छ । मन्त्री पद छाड्नै पर्ने सहमति अनुसार, अब २०७८ माघ ५ गतेबाट बाँकी दिन मात्रै ७८ रहेकाे छ ।
२०७८ चैत २४ गते ६ महिना पूरा हुनेछ । त्यसपछि मन्त्री आले र किसान श्रेष्ठकाे अवस्था के हुने हाे ? सहमति र सर्त अनुसार चाहिं नव वर्ष २०७९ वैशाख नलाग्दै २०७८ चैत २४ गते राजीनामा दिएर विदावारी हुनु पर्नेछ । साँघु न्यूजबाट
एमालेमा विष्णु पौडेललगायतको अधिकार कटौती गरेर इश्वर पोखरेललाई थपियो